Fiaraha-miasa : mpianatra 31 nahazo vatsim-pianarana ho any Sina (NewsMada) | AEMW
Fiaraha-miasa : mpianatra 31 nahazo vatsim-pianarana ho any Sina (NewsMada)
Hanainga rahampitso ny ampahany sasany amin’ny mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana ho any Sina. 31 izy ireo no nisitraka izany avy amin’ny fangatahana nataon’izy ireo teny anivon’ny Conabex, nisy koa ireo avy amin’ny congrégation sinoa ary ny confucius eny Ankatso. Anisan’ny oniversite tafiditra ao anatin’ny 50 mendrika indrindra eran-tany ny oniversite sinoa ka betsaka ny tanora malagasy maniry ny handranto fianarana na hanohy fianaran any an-toerana. Arakaraka ny lalam-piofanana safidiana ny faharetan’ny fianarana. Ho an’ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana bakalorea, maharitra efa-taona ny fianarana ka mifehy ny teny sinoa ny taona voalohany. Ho an’ny manana licence kosa, roa taona ny fianarana ahazoana ny Masters. « Tsy maintsy mpianatra namiratra tany an-dakilasy ireo voasafidy hahazo ny vatsim-pianarana any Sina », hoy ny fanazavana azo. Misandrahaka amin’ny sehatra maro ny lalam-piofanana misy any Sina : Haisoratra, fitsaboana, fambolena sy sakafo, politika, informatika…
Anisan’ny tsara ny toeram-pandraisana sy ny fepetra ho an’ny mpianatra nahazo vatsim-pianarana avy amin’ny fanjakana sinoa. Ampy mahasahana ny filana rehetra sy ny saram-pianarana ny vola vatsim-pianarana omena azy ireo. Manodidina ny 1 600 000 Ar isam-bolana ny saram-pianarana ilaina ary tsy voatery manao asa hafa hanampiana ny vola ny mpianatra. Natolotra omaly teny amin’ny masoivohon’i Sina eny Nanisana ny tapakila ho an’ny fiaramanidina mandroso sy miverina ho azy 31 miaraka amin’ny taratasy fanamarinana fa nahazo ny vatsim-pianarana tokoa izy ireo. Nanotrona izany ny masoivoho sinoa, Xiaorong Yang.
Nanomboka ny taona 1972 niarahan’ny firenena roa niasa, 1 900 ny mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana sy nandranto fianarana tany Sina. Indray mandeha isan-taona no mandefa mpianatra malagasy any an-toerana ny tomponandraikitra sinoa eto amintsika.
← Floreal Madagasikara : asa anarivony natsahatra (NewsMada)
Taxi-be eto an-dRenivohitra : hihatra amin’ny 6 septambra ny 500 Ar (NewsMada) →